မာမီ့ ပန်းပွင့်လေးများ ~ စန္ဒကူး
မေမေလည်း အဲ့လိုပဲ။ တစ်နေ့ကို ၂ခါလောက်မှ ပန်းခြံထဲဆင်းပြီး ရေလောင်းပေါင်းသင် မလုပ်ရရင် စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတာ။ သား၊သမီးတွေထက် အပင်တွေကိုတောင် ပိုဂရုစိုက်တယ်လို့ ပြောလို့ရမယ် ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီ အပင်တွေကပဲ အမြဲအဖော်ရတာ၊ သား၊ သမီးတွေက အချိန်တန်တော့လည်း အနားမှာ မရှိပေးနိုင်ကြတော့ဘူး။
အစ်မကူးကူးရဲ့ အမေက ပန်းစိုက် တော်တော် ၀ါသနာ ပါတယ်နော်။ လှလိုက်တာ ပန်းရောင်စုံလေးတွေ။ ရို့စ်လည်း အိမ်ထဲမှာ ပန်းအိုးလေးနဲ့ ပန်းပင်လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်း) ခြံထဲမှာ စိုက်ချင်တာ နေရာ မရှိလို့။
ပန်းတွေက စုံလှတယ် ကူးမာမီက သိပ်တော်တာဘဲ
ကိုယ်လဲပန်းစိုက်တာ ၀ါသနာပါတယ်.. တစ်နေ့နေ့တော့ ပန်းစိုက် စာရေး အဲလိုဘ၀လေးနဲ့ နေချင်ပါသေးတယ်
စက္ကူပန်း ၂ရောင်စပ်က တော်တော်လှတယ်။ သဉ္ဇာ့အမေရဲ့ ပန်းတွေဆိုရင် သဉ္ဇာတို့ မောင်နှမ အိုးပုတ်စာ မိတာဘဲ.. ပန်တွေခူးပြီး ဟင်းချက်တမ်း ကစားပစ်တာ :D
I'll right away grasp your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me realize so that I could subscribe. Thanks.
Look at my blog Ford Ranger Forum
Feel free to surf to my website ... mbkinternational.com